Dinner Date အတွက် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံး Restaurant | yathar Magazine
Dinner Date အတွက် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံး Restaurant
ချစ်ရတဲ့ သူတွေ ကို အကောင်းဆုံးသော အရာ နဲ့ အစားအသောက်ကောင်းတွေ ကို အတူတူဝေမျှချင်တာ လူသားတိုင်းပါပဲ ။ဒီနေ့မှာ တော့ အချစ်ငှက်လေးတွေ အတွက် အကောင်းဆုံး Dinning Date လေး လုပ်လို့မယ့် နေရာလေးတွေကို ပြောပြပေးမှာပါနော် ။တစ်ချို့သော Placement တွေ က မင်မင်ကိုယ်တိုင်တောင် ရောက်ဖူးချင်တာ ..(မင်မင်မှာရော Date မယ့်သူရှိလား မမေးကြေး ) Dinner Date ဆိုတော့ Romance ဆန်ရမယ် ၊ Classic Vibe မျိုးလေး ရှိရမယ် ၊ အစားအသောက်တွေ လည်း အရသာအကောင်းဆုံးဖြစ်ရမယ်ပေါ့ ။နိုင်ငံခြားဆန်ဆန် ” Will you marry me ? ” လုပ်လို့ကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေး တွေ ကို မိတ်ဆက်ပေးမယ် ။ဆိုင်လေး ဆိုပြီး အထင်တော့ မသေးပါနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းအောင်ရေးထားတာ ၊ တကယ်က ရှယ်ခမ်းခမ်းနားနား ကြီးတွေ ။ လုံး၀ Luxury Type အမျိုးအစားတွေ ကြီးပဲ … ဘာတွေလဲကြည့်လိုက်ရအောင်…
(1) Seeds Restaurant & Lounge
Outdoor Dinning အတွက် ဒီနေရာလေးက လုံး၀ နိဗ္ဗာန်ဘုံပဲ ။ ညဖက်ဆို မီးရောင် လေးတွေ နဲ့ View အရမ်းလှတယ် ။ Steak လေးစား ၊ ဝိုင်အကောင်းစားလေး သောက်ရင်း ခမ်းနားတဲ့ Dinner အချိန်လေး တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရမှာပါ ။
လိပ်စာကတော့ ။ ။ No.63A, U Tun Nyein Street , Ward 10 , Mayangone Township . Yangon .
(2) Le Cellier , Wine Bar & Restaurant
ရန်ကုန်မြို့ က Rooftop Dinning တွေ ထဲ မှာ အမိုက်တကာ့ အမိုက်ဆုံးပဲ ။ Location ကနေ အထားရော ၊ Classic ဆန်မှု ရော အမြင့် ဆုံးမှာ ရှိတဲ့ Novotel Max Hotel ရဲ့ 14 လွှာမှာ ရှိတဲ့ Le Cellier ပါ ။ ဒီလို နေရာမှာသာ Propose လုပ်မယ်ဆိုရင် တော့ တော်တော်ကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုလို့ ပြောရတယ် ။ Wine Bar ဆိုတော့ အကောင်းဆုံးဝိုင်တွေ နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အစားအသောက်ကောင်းတွေ ကို မြည်းစမ်းကြည့်သင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းပါရစေ ။
(3) Le Planteur Bar & Restaurant
အစားအသောက် အရမ်းကောင်းပြီးတော့ ၊ တော်တော်ကို လှတဲ့ နေရာလေးပါ ။ Cele တော်တော်များတောင် ကြိုက်လို့ လာစားပြီး Review လုပ်ပေးထားတွေ တောင် ရှိပါတယ် ။
European Food ကြိုက်တတ်တဲ့ သူတွေ အတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ အစားအစာ တွေကို ဒီနေရာလေး မှာမြည်းစမ်းရင် သာယာလှပတဲ့ Night Dinning လေးကို ပိုင်ဆိုင်လို့ ရပါပြီ ။
Le Planteur ရဲ့ တည်နေရာကတော့
No. 80 , University Avenue , Yangon .
(4) The Strand Yangon
ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ Classical အဖြစ်ဆုံး နဲ့ Old But Gold အဖြစ်ဆုံး Dinning Placement လေး တစ်နေရာ ရှိတယ် ။ အရမ်း Royal ဖြစ်တယ် ၊ Yangon မြို့ပြ အမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ အပြာရောင်ဆိုင်းဘုတ်လေးတောင် ရထားသေးတယ် ။ အရသာရှိတဲ့ အဆင့်အတန်းမြင့် အစားအသောက်တွေ ကိုလည်း ခံစားလို့ ရမယ့် The Strand Yangon ပါ ။
(5) Vintage Luxury Yacht
ရေပေါ် Dinning လေးဆိုလည်း ခပ်ဆန်းဆန်း နဲ့ Feel လေး တစ်မျိုးပေါ့ ။ သင်္ဘောကြီးပေါ်မှာ ဝိုင်လေးသောက်ရင်း ညစာစားမယ်ပေါ့ ။ အခန့်သင့်သွား ခဲ့ ရင် လည်း ရေပေါ် Hotel က မှာ တစ်ည လောက်ဖြစ်ဖြစ် အိပ်သွားမယ်ပေါ့ ။ ခံစားလို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ Dinner Date လေး တစ်ခု ဖြစ်မှာ အသေအချာပါပဲ ။
ဒီတစ်ပတ်တော့ Dinning Date လုပ်လို့ကောင်းမယ်နေရာလေး တွေ ကို ဖော်ပြပေးသွားပါတယ် ။ ဒီမှာ တစ်ချက် အရေးကြီးတာ က Date မယ့်သူရှိဖို့ ပဲ ။
ရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ ဗျာ ။
မြင်လိုက်ရင်ဗိုက်ဆာလာမယ့် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အစားအစာများကိုတော့ ဒီလင့် လေးကနေ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Hot Pot ဆိုင်များ